Axmed Aadan Samantar (Cubeyd) ”Galmudug Waxay Gaalkacyo qabsanaysaa Markii qofka u dambeeya dhinto”+Cod | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Axmed Aadan Samantar (Cubeyd) ”Galmudug Waxay Gaalkacyo qabsanaysaa Markii qofka u dambeeya dhinto”+Cod
Mid ka mid ah Odayaasha Dhaqanka Gobolka Mudug ee kasoo jeeda Puntland ayaa si adag uga hadlay Arrimaha ka taagan Gobolka gaar ahaana magaalada Gaalkacyo, waxaana Axmed Aadan Samantar (Cubeyd) uu sheegay in Galmudug ay diyaar u tahay in Gobolka qabsato loona baahan yahay in ay ka feejignaadaan odayaasha iyo guud ahaanba Bulshada Reer Puntland.
Axmed Aadan Samantar (Cubeyd) ayaa sheegay in Madaxwaynaha Dawladda Federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud uu hubkii loogu talo galay in dalka looga xoreeyo Alshabaab uu keenay Gaalkacyo si Puntland magaalada looga qabsado, waxaana intaas uu ku daray in Madaxwaynaha Galmudug uu soo qataay waajibka ah in ay qabsadaan Gaalkacyo, uuna taas ogsoon yahay.
Waxaa uu sheegay in Ra’iisulwasaraaha Soomaaliya uu hoosaasinayo bulshada loona baahan yahay in arrinkaas laga feejignaado, isagoona intaas ku daray in laga feejignaado hagar daamooyinka badan ee ay wadaan dhinacyo Dalwadda Soomaaliya u shaqeeya.
Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya ayuub sheegay in Soomaaliland uu u shaqaynayo uuna doonayan nabad ka dhalata Koonfurta dalka si Soomaaliland aqoonsi u hesho.
Dhismaha waddadii la joojhiyay dhamaadka Sanadkii hore ayuu sheegay xitaa inay Puntland dhisanayso, isagoona sheegay in Galmudug aaan laga haybaysanayn shaqooyinka Puntland ka qabanayso xaafadaha ay ka taliso.